၎င်းတို့အား Tech မှကျောင်း - Pro ကိုတစ်ဦး Virtualization ဖြစ်လာလုပ်နည်း
တစ်ဦး Virtualization Pro ကိုဖြစ်လာလုပ်နည်း
တစ်ဦး Virtualization Pro ကိုဖြစ်လာ
1 ။ စတင်ဆီသို့စတင်။
2 ။ အသေးစားစတင်ဖို့။
3 ။ တစ်ဦးပလက်ဖောင်း Pick နှင့်ကျွမ်းကျင်။
4 ။ အဆိုပါ Next ကိုအဆင့်ကယူပါ။
အဆိုပါ virtualization စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုမိုလျင်မြန်စွာမကြာသေးမီမှတ်ဉာဏ်အတွက်အခြားမည်သည့်အချိန်ထက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစဉ်မပြတ်တိုးတက်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူ, ပတ်ပတ်လည်သင်၏ဦးခေါင်းခြုံဖို့သင်တို့အဘို့ထုတ်လုပ်အဆက်မပြတ်အသစ်သောအကြံအစည်များနှင့်အတွေးအခေါ်များရှိပါတယ်။
သိသာပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦး virtualization ကိုတက်လေမှကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်, သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဇာတ်လမ်းကိုတစ် virtualized အောင်မြင်မှုစေကူညီပေးပါမည်တဲ့အဓိကဦးစားပေးအဖြစ်တစ်လမ်းရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ် virtualization မာစတာသို့သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုတည်ဆောက်ရန်ယခုယူပြီးစတင်နိုငျကွောငျးလေးရိုးရှင်းတဲ့အပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်ထွက်အိပ်လေ၏။
စိတျထဲမှာအတညျ့အလငျးတစ် virtualization Ace တက်အဆုံးသတ်မှအဆုံးရည်မှန်းချက် Keeping, သင် server ကိုအဖှဲ့အစညျးနှငျ့စတငျအမျိုးမျိုးကိုအခြားအိုင်တီစည်းကမ်းနှင့် ပတ်သက်. တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ တစ်ဦးကအခြေခံ setup ကိုအများကြီးတောင်းဆိုရန်မည်မဟုတ်, သေးသငျသညျ ပို. ပို. ကို virtual မူဘောင်အထဲကအလုပ်လုပ်အဖြစ်, အမှုအရာတစ်ဦးအလုအယက်အတွက်အနုစိတ်ရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ Linux ကိုစွဲချက်, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လို boot မည်မဟုတ်ကြောင်းကို Windows server ကိုအခြေချရန်မှတ်မိသလောက်မှတိုက်ဖျက်ဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့လိမ့်မယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးတုတ်ကျင်းထဲမှာစွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအလွန့်အလွန်ကိုသင်အဘယ်အကျိုးကိုရကြလိမ့်မည်။
Networking, အထူးသ, ထိုနည်းတူ furry ရနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ CompTIA Network ကို + သင်တန်းပေးခြင်းရေတွင်းတစ်တွင်း-လုပ်ကြံကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်များအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုကွန်ယက်ကိုအပြေးထွက်အပိုင်းအနည်းငယ် VLAN နှင့် subnets ရပါလိမ့်မယ်သောသင်အကြံပေးများနှင့်မျှဝေသိုလှောင်နှင့်အတူစကားပြောကာစွမ်းရည်ကွန်ရက်များနှင့်လည်းသင့်ရဲ့များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော network များပါလိမ့်မယ် လုံခြုံရေးလိုအပ်အဖြစ်ကို virtual servers များ။ ကျနော်တို့ VLAN ၏စဉ်းစားရွှေ့ပြောင်းသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, သငျသညျအိမ်ရှင်နှစ်ဦးစလုံးနှင့် switch ကိုအပေါ်တိကျစွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်, ဒါမှမဟုတ်စာပေးစာယူပေါ်ပေါက်မည်မဟုတ်အားလုံး၏တစ်ဦးချင်းစီကွန်ရက်ကသည်ဆာဗာတွင်အနည်းငယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းများ, ရှိသည်။
ထိုအခြိနျတှငျအရာအားလုံးသည်ဤလိုင်းများတလျှောက်ဖြစ်ကြောင်းကို, သင်ပိုကောင်းကွန်ယက်အချို့အားကြီးသောကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်3မှာချတတ်၏။
ပတ်ပတ်လည် lounging ဟောင်း decommissioned server ကိုရှိသလား? ကု! Dilly dally နှင့် VMware သို့မဟုတ် Microsoft က Hyper-V ကိုတစ်ဦးအခမဲ့ပုံစံတက်သီးနှံများကိုပုံ။
သင်ဘယ်လိုမေးလျှောက်? ကျနော်တို့ပြောနေမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသို့သဘောမျိုးလုပ်သွားပါ။
C'mon, သင်ထားတဲ့အိုင်တီသူချင်း / အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါပဲ, သင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အသစ်ပစ္စည်းပစ္စယများ၏အဓိပ္ပာယ်စေနထေိုငျ! ထို့အပွငျကလုံးဝကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဘလော့ဂ် entries တွေကို၏ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးယူလိမ့်မယ်။ အတားအဆီးနှင့်ယခုလိုတင်းတင်းပြောတတ်တဲ့ hit, ဒါကြောင့်သင်ပယ်ရှင်းစမတ်သင်ယူနှင့်စွန့်ခွာလိမ့်မယ်အဓိကလမ်းမှာရိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။
သင်ပြုသောအနေနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သင်ကစားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ sandbox 'ရှိပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကို Windows server ကိုထုတ်လုပ်, တကအာကာသ controller ကိုအောင်, ရုံးခွေးဓါတ်ပုံတွေကိုတခု IIS server ကိုတို့ပါဝင်သည်, တစ်ဦး Linux ကိုသေတ္တာတို့ပါဝင်သည်နှင့် syslog application သို့မဟုတ်သမျှဆန်းသစ်တီထွင်မှုသင်နှင့်အတူဆော့ကစားရန်လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆက်ပေး။ ရိုးရှင်းစွာအသင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုကွန်ယက်ဖော်ထုတ်ပေါ်မှာဘာမှဝတ်မ။ စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ, ဒီနှစ်ခု fizzled စက်ဝိုင်းနှင့်အတူတစ် Grumpy, 12 နှစ်အရွယ် server ကိုနှင့်မင်းထက်ပြန်လည်စတင်တစ် Savage ဥပမာအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ VMware နဲ့က Hyper-V ကိုကြိုတင်ကဆိုသည်။ နှစ်ဦးစလုံး hypervisors, တကယ်သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ရှင်ရဲ့ CPU ကို, RAM, သူတို့အားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရန်ကို virtual စက်တွေကို enable လုပ်ဖို့စွမ်းရည် abstracts သောထုတ်ကုန်အလွှာဖြစ်ကြသည်။ လက်လှမ်း hypervisors အများအပြားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နေစဉ်, အထင်ရှားဆုံးနှစ်ခု VMware ၏ vSphere နဲ့ Microsoft ရဲ့က Hyper-V ကိုဖြစ်ကြသည်။
နှစ်ဦးစလုံးအလွန်ပစ္စည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်အတူတူ, ဝေးခြုံငုံစက်မှုလုပ်ငန်း၏အပိုင်းအစ၏အားဖြင့်အများဆုံးဝင်စား။ နေကြသည် နှစ်ဦးစလုံးသင်ယူခြင်း, သေးသင်တဦးတည်းဇာတ်စင်အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအခွင့်အာဏာကိုကိုယ်စားပြုသင့်၏ထိုက်။ သင်တစ်ဦးသည် Microsoft ဆိုင်ကို run သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, က Hyper-V ကိုအထူးသဖြင့်က 2008 ကတည်းက Windows Server တစ်ခုချင်းစီတစ်အုပ်ဖြစ်အတူစံကြွလာသောမြေပေါ်တွင်အဆိုပါငြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့် Linux ကိုဆာဗာများရှိသည်သို့မဟုတ် Non-Microsoft ကပစ္စည်းများကိုစိတ်ဝင်စားသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်ပြီးတော့ vSphere မှာကြည့်ပါ။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, CBT အခဲသင်လိုအပ်ချက်လေ့ကျင့်နေအလုံးစုံတို့အဘို့လုံခြုံခဲ့ပါသည်။ Microsoft က၎င်း၏ MCSA နဲ့ MCSE server ကိုခြေရာခံအတညျပွုအတွက်လုံးဝက Hyper-V ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်း, VMware ၏ VCP-DCV အသိအမှတ်ပြု vSphere သို့လေးနက်တဲ့ကျဆင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှု, စင်မြင့်, နှင့်စက်များတယ်, ဒါကြောင့်သင်က virtualization ပါရမီသို့လှည့်ရန်သင့်ချဉ်းကပ်မှုအပေါ်ကောင်းစွာပါပဲ။ သင်သည်သင်၏ကို virtual မူဘောင်အထဲကဖြစ်လာသကဲ့သို့, အသုံးပြုရန်သင်၏ hypervisor ၏အကြီးမားဆုံးသောသော့ချက်အစိတ်အပိုင်းမြင့်မားသောအသုံးပြုနိုင်စွမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ တဦးတည်းပြတ်တောက်သွားသည့်အခါဤသည်လာမည့်ပေါ်သို့ထို့နောက်တဦးတည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ရှင်နှင့်အတူစတင်ကို virtual စက်တွေ၏ failover ပရိုဂရမ်အကောင့်သို့ကြာပါသည်။
အဲဒီမှာကုန်ကျသို့သော်မူတည်င်, ထိုသို့မလိုအပ်တဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ အပိုဆောင်းအသုံးစရိတ်, သိသာတဲ့ပိုမိုမြင့်မား ups အနေဖြင့်လိုအပ်သည့်အတွက်ပိုပြီးဝယ်ယူဆိုလို။ ဤအချက်မှာ, သင်သည်ဤတိုးတက်မှုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ့ဒ်ဝဲစိတ်ပျက်မိကြောင်းနှင့်အခြေခံ upkeep ကနေစရိတ်နှင့်ကျချိန်လျော့နိုင်ပါတယ်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဖြစ်သင့်၏။
virtualization အမြဲအိုင်တီအသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်နိုင်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သငျသညျယခုအခါကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးကိစ္စတွင်ပါကထိုသူအပေါင်းတို့အိုင်တီအပြစ်တွေများအတွက်စံတာဝန်ခံဖြစ်ထွက်လှည့်ခဲ့ကြကြောင်းကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်သကဲ့သို့, စတင်ဖို့နဲ့လေ့လာသင်ယူဖို့အားထုတ်မှုနဲ့တက်ကြွရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့သင်တို့အပေါ်၌မှီခိုပါပဲ။
VMware ကအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် ပတ်သက်.7အံ့သြဖွယ်သင်တန်းများ